Hotlọ nkwari akụ anọ na oge ezumike iji weghachi Cartagena ụkpụrụ ụlọ ya
Home » Na-agbasa News Travel » Hotlọ nkwari akụ anọ na oge ezumike iji weghachi Cartagena ụkpụrụ ụlọ ya
Asonslọ nkwari akụ anọ na ezumike, na San Francisco Investments, ndị enyemaka nke Valorem, otu azụmaahịa nwere ikike ndị isi na Colombia na mgbasa ozi, ntụrụndụ, ụlọ ahịa na ihe eji emegharị emegharị, na-ekwupụta atụmatụ ịmepe ọmarịcha ụlọ nkwari akụ na ụlọ obibi nkeonwe na Cartagena, otu n'ime South America kasị akụkọ ihe mere eme na mara mma seaside obodo.
Dabere n'ọnụ ụzọ Cartagena bụ obodo nwere mgbidi, akụkọ ihe mere eme nke UNESCO, World Seasons Hotel na Residences Cartagena ga-agbanwe ma weghachite ọtụtụ ụlọ ọdịbendị mara mma malite na narị afọ nke 16, gụnyere Cloister nke Saint Francis (Claustro de San) Francisco) nke gụnyere Chọọchị Saint Francis nke narị afọ nke 16; ndị Club Cartagena, a 1920s Beaux Arts masterpiece; na ebe nkiri anọ a ma ama, Teatro Cartagena, Teatro Calamarí, Teatro Bucanero na Teatro Rialto. A ga-eme ka ụlọ ndị a dịghachi ndụ ọzọ site na mweghachi nlezianya iji chekwaa facades na ihe owuwu akụkọ ihe mere eme. N'ịbụ onye dị n'ime agbata obi Getsemaní dị ndụ, ụlọ nkwari akụ na andlọ Nche nke Onwe ga-enye ndị ọbịa na ndị bi na ya ohere ịnweta ọdịbendị na ntụrụndụ nke Cartagena, yana akara ngosi ụlọ ya zuru oke.
Maka ndị na-achọ inyocha osimiri Caribbean na ụsọ mmiri agwaetiti, Bodeguita Pier dị nso na-enye ndị ọbịa ohere ịmalite njem na Barú Island ma ọ bụ agwaetiti Colombia a ma ama Islas Corales del Rosario. Ndị njem azụmahịa ga-enwerịrị ohere ịbanye na ebe mgbakọ obodo ahụ dị n'akụkụ Hotel.
Carlos Arturo Londoño, Onye isi ala, Valorem na-ekwu, "Anyị nwere obi ụtọ na anyị ga - esoro akara ngosi akara ngosi anọ maka oge iji wuo ụlọ oriri na ọ andụ andụ ọhụrụ na ebe obibi nkeonwe na obodo dị ebube nke Cartagena," "Ejikọtara ya na oge anọ dị iche iche, ụlọ oriri na ọ restoredụ andụ ọhụrụ eweghachiri na nkeonwe ga-abụ ebe a na-achọsi ike ibi na nleta ma gbanwee mpaghara ile ọbịa na Cartagena."
"Hotellọ nkwari akụ ọhụrụ a na nke obibi nkeonwe bụ ọrụ zuru oke maka anyị iji gbasaa ọnụnọ anyị na South America, na-enye anyị ohere na-adịghị ahụkebe iji gbanwee ụdị nchịkọta dị iche iche nke ụlọ akụkọ ihe mere eme n'ime ebe mara mma n'otu n'ime obodo ndị kachasị egwu," ka Bart Carnahan, onye isi osote onye isi ala, Global Business Development na Pọtụfoliyo na-ekwu, Oge anọ na-ezukọ na Resorts. "Anyị na ndị mmekọ anyị na Valorem, anyị na-atụ anya iweta ezigbo ụlọ ọbịa kachasị mma na Cartagena."
Site na ime ụlọ nke François Catroux na Wimberly Interiors mere, ụlọ oriri ọhụrụ a ga-enwe ime ụlọ 131, gụnyere Royal Suite na Presidential Suite na-etu ọnụ 4,200 square feet (390 square square) na 3,500 square feet (325 square mita) nke ebe obibi n'otu n'otu. Hotellọ oriri na ọ Hotelụ willụ ahụ ga-enye isii echiche pụrụ iche nke AvroKO maka nri na ihe ọ beụverageụ na mmanya yana ime ụlọ na ime ụlọ yana ebe ezumike dị egwu na obi nke Club Cartagena. Poollọ elu ụlọ a ga-enye echiche doro anya banyere Cartagena Bay na obodo ochie nwere mgbidi ebe ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ọdọ mmiri na ebe a na-egwu mmiri mgbe ha na-atụrụ ndụ na cabanas nkeonwe na akwa ụbọchị. A mbinye aka Anọ anọ spa yana ahụ ike center ga-abụ maka ndị na-agụ agụụ iji zuru ike ma na-ọhụrụ ha ahu na uche.
Hotellọ nkwari akụ anọ na ụlọ obibi nkeonwe Cartagena ga-agụnye ihe dịka iri na isii, Nke mbụ, aha ụlọ obibi nke mbụ na Mpaghara akụkọ ihe mere eme nke akara ọkwa kachasị elu nke ọrụ Oge anọ. Hotellọ nkwari akụ ahụ ga-agụnye square mita 16 (16,000 square mita) nke nzukọ na oghere ihe omume, ha niile dị n'ime oghere akụkọ ihe mere eme mara mma.
Cambria Hotel Milwaukee Downtown na-ekwupụta mmeghe August
Ọrụ arụmọrụ Delta maka Mee 2019
Onye ode akwukwo njem nleta nke Kenya Najib Balala chọrọ ka Companlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọgwụ n'Africa mepụta ọgwụ mgbochi COVID n'efu
Ozi banyere njem na Europe
Ndị Britain na-eme njem mana ọ bụghị na Turkish Airlines, Qatar Airways, Etihad, ma ọ bụ Emirates Airlines
Mgbanwe ibu Sheremetyevo Moscow toro site na 4.5% na Q1 2021
Jamaica ka nọ n’ogwe iwu